के तपाईंलाई पनि यी बानी लागेका छन्, सावधान आयु छोटिएला है ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»के तपाईंलाई पनि यी बानी लागेका छन्, सावधान आयु छोटिएला है !
के तपाईंलाई पनि यी बानी लागेका छन्, सावधान आयु छोटिएला है !
By लाल्टिन डट कम June 12, 2022 No Comments2 Mins Read
सबै मानिसहरुलाई स्वस्थ भएर जीवन जीउन मन लाग्छ। हत्तपत्त मानिसहरु मर्न चाहँदैनन् ।
तर जानी नजानी हामीले जीवनशैलीमा धेरै गल्तीहरु गरेका हुन्छौँ जसले रोगी बनाइदिन्छ र चाँडै मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्छ।
जीवनयापनका क्रममा हामी त्यस्ता थुप्रै गल्ती दोहोर्‍याउँछौ, जसले हामीलाई समयअघि नै रोगी, जीर्ण, बुढो बनाउँछ । हामी समयभन्दा अगाडि नै थला पर्छाैँ र मृत्युवरण गर्न पुग्छौँ।
यी कुरा सामान्य हुन् तर त्यही सामान्य कुराले हामीलाई समयभन्दा छिटो बुढो बनाउँछ।
ती सुधार्न जरुरी बानीहरु यस प्रकार छन्:
बिहान या दिनमा यौनसम्पर्क